Fomba fanamafisana ny tariby fampidirana ny tariby varahina, tariby vy, tariby varahina, sns
Amin'ny famokarana tariby vy, tariby varahina, tariby varahina, ary vy na fanafanana lovia lohataona varahina, ny fizotran'ny fitsaboana hafanana samihafa dia ampiasaina, toy ny fanaovana sary an-tariby, ny famafana aorian'ny famokarana, ny famonoana ny hafanana amin'ny fepetra takiana manokana, induction aegaling alohan'ny hampiasana azy ho toy ny akora, sns. Betsaka ny fangatahana amin'izao fotoana izao momba ny fanafanana an-tserasera amin'ny hafainganam-pandeha haingana, ny mari-pana isan-karazany, ny famoahana herinaratra marina, ary ny fifehezana ny mari-pana amin'ny tariby kely misy savaivony; noho izany, ny fomba fanamainana marina dia tsy maintsy atao. Ny fananana tombony amin'ny avo lenta amin'ny fivezivezena mandeha ho azy (ao anatin'izany ny fametrahana ny fotoana, ny mari-pana, ny herinaratra), ny fitaovana fampidinana HLQ dia hita fa tena mety amin'ny famitana ny fitsaboana hafanana tariby sy tariby. Mahay mandray fanaraha-maso lavitra ny fanombohana / fijanonana, fanatanterahana ny fanitsiana herinaratra, miasa 24 ora / andro, famoahana herinaratra haingana, ary fanidiana ny masinina haingana araka ny famantarana ny fanaraha-maso ny mari-pana, ny vokatra fampidiran-tsika fampidirana dia afaka mamaly ny takiana isan-karazany amin'ny tariby misy ankehitriny. ary ny fanafanana tariby.
Inona ny fampidirana tariby sy tariby fampidirana?
Ny HLQ Induction Equipment Co dia manolotra vahaolana ho an'ny rindranasa marobe avy amin'ny tariby ferrous sy tsy ferrous strukturna, tariby varahina sy alimo ary alim-pitaterana mankany amin'ny famokarana fibre optika. Ny rindranasa dia midadasika be, anisan'izany ny, saingy tsy voafetra amin'ny, famoronana, fisokafana, fitsaboana hafanana, fanamafisam-peo, fanosotra, fanaovana sary sns amin'ny mari-pana manomboka amin'ny 10 an'ny degre ka hatramin'ny 1,500 degre.
Ny rafitra dia azo ampiasaina ho vahaolana feno fanafanana anao na ho fampiroboroboana hanatsarana ny famokarana fatana misy amin'ny alàlan'ny fiasa ho preheater. Ny vahaolana fanamorana hidiranay dia malaza amin'ny fahaizany mamokatra, mamokatra ary mahomby. Na dia manome vahaolana isan-karazany aza izahay, dia manatsara ny ankamaroany hamaly ny fepetra takinao manokana. Ny rafitra fampivoarana izay havaozina ho an'ny zavatra takinao miaraka amina vahaolana namboarina dia HLQ Induction Equipment specialty.
Ny fampiharana mahazatra dia:
Fanamainana ny fanadiovana ny poste na fanesorana rano na solvent amin'ny coatings
Fanasitranana ny ranoka na vovoka mifototra. Manome hery matanjaka sy faran'izay ambony
Fanaparitahana fanaronana metaly
Fanafanana mialoha ho an'ny fantsom-panafody vita amin'ny polymer sy metaly
Fitsaboana hafanana ao anatin'izany: ny fanalefahana ny fihenjanana, ny fifehezana, ny fampidirana annealing, ny fanakonana mamirapiratra, ny fanamafisana, ny patanty sns.
Fampafanafana mialoha ho an'ny famolavolana mafana na fisolokiana, indrindra indrindra ho an'ny alloys famaritana
Induction Heating dia ampiasaina ihany koa ho an'ny preheating, post hafanana na fanindronana tariby metaly miaraka amin'ny fatorana / fanadiovana volo ny insulate na miaro ao anatin'ny vokatra tariby isan-karazany. Ny fampiharana preheating dia mety ahitana tariby fanafanana alohan'ny hanoratana azy na hivoaka. Ny fanamafisana ny post dia matetika ahitana dingana toy ny fatorana, volcanizing, fanasitranana na fanamainana loko, adhesives na insulate fitaovana. Ankoatry ny fanomezana hafanana marina sy ny hafainganana haingam-pandeha haingana kokoa, ny herin'ny vokatra azo avy amin'ny famatsiana herinaratra fampidinana dia azo fehezina amin'ny alàlan'ny hafainganam-pandehan'ny rafitra amin'ny ankamaroan'ny tranga. HLQ mizara karazan-tsolika fanamafisam-peo fanodinana indostrialy izay azo ampiasaina amin'ireo fizotrany ireo.
FAMPANDROSOANA FAMPANDROSOANA WIRE INDUCTION
Ny HLQ UHF sy ny MF Series an'ny induction Heating Systems dia manolotra habetsaky ny herinaratra isan-kerinandro manomboka amin'ny 3.0 ka hatramin'ny 500kW, izay mifandraika amin'ny fahombiazan'ny teknika amin'ny fampiharana mpanjifa maro karazana. Natao miaraka amina capacitance tanky azo ovaina sy mpanova output multi-tap, ny HLQ Induction Heating Systems dia malefaka sy azo antoka hihaona amin'ny fepetra famokarana takiana takian'i fanafanana tariby fampidirana ary fitaovana fanamafisam-peo.
Sokajy Technologies Tags tariby varahina, fananganana vy, fanalefahana, fampidirana fanamafisam-peo, fanamafisana ny tariby varahina, fanamafisana ny tariby varahina, tariby varahina fampidirana, fanamafisana tariby vy, fanamoriana tariby fampidirana, fanafanana tariby fampidirana, fanafanana tariby, fanafanana tariby, vahaolana fampidirana tariby Post Fikarohana